पोस्टमार्टम गर्न डाक्टर अभाव- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
पोस्टमार्टम गर्न डाक्टर अभाव
श्रावण २४, २०७६ राजेन्द्र मानन्धर
दोलखा — सरकारी स्वामित्वको चरिकोट अस्पतालमा मंगलबार एउटा शवको पोस्टमार्टम गर्न निजी क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टरको सहयोग लिनुपर्‍यो । शवको पोस्टमार्टम सरकारी चिकित्सकले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी दरबन्दीअनुसार हुनुपर्ने ३ जना डाक्टर काजमा अन्यत्र खटाइएपछि निजी क्षेत्रका डाक्टरलाई जिम्मेवारी परेको हो ।
गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नमुना परियोजना चलिरहेको अस्पताल नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र न्याय हेल्थको साझेदारीमा सञ्चालित छ । अस्पताल सञ्चालन सम्झौतामा सरकारी र निजी क्षेत्रका चिकित्सकले साझेदारीमा सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । २०७२ साल माघ ५ मा भएको सम्झौतामा चरिकोट प्राथमिक उपचार केन्द्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र न्याय हेल्थ संस्थाबीच ५० बेडको चरिकोट अस्पताल बनाउने उल्लेख छ ।
दैनिक तीन सय व्यक्ति जाँच गर्न आउने अस्पतालमा पर्याप्त चिकित्सक नभएकाले सेवाग्रहीलाई सास्ती छँदै छ, शवको पोस्टमार्टमसमेत रोकिने अवस्था आइपरेको भीमेश्वर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले बताए । त्यसैले अस्पताल सम्झौताको भावनाअनुसार निजी क्षेत्रतर्फका चिकित्सकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पोस्टमार्टमको समेत जिम्मेवारी दिएपछि शव उठेको उनले जानकारी दिए ।
सम्झौताअनुसार अस्पताल सञ्चालनलाई नगरपालिकाले सम्हाल्नुपर्छ । न्याय हेल्थले कार्यकारी काम तथा आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । १० वर्षसम्म सरकारले अस्पतालको सञ्चालनको मुख्य साँचो न्याय हेल्थलाई सुम्पिए पनि अस्पतालको अध्यक्षता भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयरले गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तह भीमेश्वर नगरपालिकाले पनि सम्झौताको भावअनुसार अस्पतालको जिम्मेवारी लिन सकेको छैन । साथै, जिल्लाकै नमुना र निःशुल्क सेवा दिइरहेको अस्पताललाई बजेट छुट्ट्याउन पनि कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काले अस्पताललाई बिस्तारै नगरपालिकाले बजेट थप्दै निगरानी बढाउँदै जाने बताए ।
जिल्लाभरिको जनताको स्वास्थ्य सेवाको भार थेग्नुपर्ने अस्पताललाई नेपाल सरकारले ५० बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न आलटाल गरिरहेको छ । चिकित्सकको दरबन्दी धमाधम झिकेर सरकारी अस्पतालको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पँदै गएको छ । अस्पतालप्रति बिरामीको आकर्षण र बढदो चापअनुसार न्याय हेल्थले पनि पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका छन् ।
उपचार, औषधि र शय्यालगायत सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क भएकाले अस्पतालमा जिल्ला भित्र र बाहिरबाट समेत उपचार गराउन आउँछन् । अमेरिकी सहयोगमा स्थापित न्याय हेल्थको व्यवस्थापनमा प्रविधियुक्त दर्ता प्रक्रियादेखि शल्यक्रियासम्म निःशुल्क हुने छ । सरसफाइ र व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त देखिन्छ । त्यसैले बिरामीको भीड दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
सरकारी डाक्टर नभएपछि भीमेश्वर नगरपालिकाले सोमबारदेखि न्याय हेल्थका डा. विनोद दंगाललाई पोस्टमार्ट गर्ने अधिकारसहित पत्र थमाएको हो । अस्पतालको प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सकको भूमिकामा नेतृत्व गरिरहेका डा. दंगालले बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा सरकारी प्रशासनिक कार्यसमेत थपिँदा अप्ठेरो पर्ने बताए ।
‘स्थानीय सरकारले लेखेर दिएपछि बाध्यताबस पोस्टमार्टमको कार्य गरें,’ उनले भने । निःशुल्क सेवा भएको अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्तिले नभ्याउने गरी भीड लाग्छ । निजी अस्पतालमा लाखौं पर्ने शल्यक्रिया अस्पतालमा निःशुल्क हुन्छ । त्यसैले सुत्केरी हुन र जटिल शल्यक्रिया गर्न जिल्लाभित्र र बाहिरबाट समेत आउने गर्छन् । तर जनशक्ति अभावले छ । सरकारले ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरवृद्धि गरेपछि जनशक्तिको समस्या नहुने सूचना अधिकारी शान्तिप्रसाद न्यौपालेले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:४०
नयाँ प्रविधिबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन
काभ्रे — फोहोरमैलाको समस्या भोगिरहेको बनेपा नगरपालिकाले व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रविधि सुरुवात गर्न लागेको छ । धुवाँ र ध्वनि प्रदूषणबिनै सबै प्रकारका फोहोरलाई एकैपटक जलाउन मिल्ने ‘इन्डस्ट्रियल वेट इन्सिनेटर’ जडान गरेर व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।
जापानी प्रविधि नेपाल भित्र्याएको हिटा ग्रुपको नेपालस्थित प्रबन्धक ग्याल्पो लामाका अनुसार, ‘सीएक्स ५’ मेसिनले एक दिनमा ८ घण्टाको दरले दैनिक ५ टन फोहोर जलाउन सक्छ ।
२ करोड ५० लाख मूल्य पर्ने मेसिनले फलाम र सिसाबाहेकका फोहोर जलाउन सक्छ । जलाउँदा निस्क्ने धुवाँलाई पानीको बाफले नियन्त्रण गर्ने भएकाले धुवाँ र गन्धसमेत नआउने उनले दाबी गरे । पानी, डिजेल र बत्तीबाट चल्ने मेसिनबाट निस्कने तातो पानी नुहाउन, लुगा धुन प्रयोग गर्न सकिने र फोहोर जलाएर निस्कने खरानीबाट ब्लक निर्माण गर्न सकिने लामाले सुनाए ।
‘धुलो, धुवाँ पनि नहुने र बहुउपयोगी देखेर यो प्रविधि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको जानकारी दिँदै नगरप्रमुख लक्ष्मीनरसिं बादेले भने, ‘तत्कालको व्यवस्थापनका लागि यो निर्णयमा पुगेका हौं ।’ बनेपामा दैनिक १० टन फोहोर जम्मा हुने गरेको छ । श्रीखण्डपुरस्थित आफ्नो जग्गामा फोहोर थुपार्न नगरपालिकालाई स्थानीयले अवरोध गरेपछि काठमाडौं नगरपालिकाको सहकार्यमा ठेकेदारमार्फत् सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
बस्तीको बीचमा र कृषिका लागि छुट्ट्याएको जग्गामा फोहोर जलाउने मेसिन राख्न लागेको भन्दै बनेपा–९ का स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:३९